Wararka - Sidee loo helaa oraah sax ah oo ku saabsan mashruucaaga boorsada?
Macaamiil badan oo raadinaya warshadaha boorsada gacanta ayaa rajeynaya inay helaan oraahyo sax ah sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan boorsooyinkooda gaarka ah ee ay sameeyeen. Si kastaba ha noqotee, sababo kala duwan awgood, way ku adag tahay soo-saareyaasha inay ku siiyaan oraah aad u sax ah iyadoon muunad ama shandado faahfaahin laga helin. Xaqiiqdii, waxaa jira hab lagu helo oraah sax ah, aan fiirino!
Warshadaha boorsada gacanta ayaa guud ahaan xisaabiya qiimaha iyadoo lagu saleynayo nashqadda, maaddada, iyo cabbirka bacda. Haddii macaamilku kaliya u diro sawirrada soo-saaraha, soo-saaraha ayaan hubin faahfaahinta gaarka ah ee xirmada mana bixin karo oraah sax ah.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad hesho oraah sax ah, sida ugu fiican ayaa ah inaad u dirto xirmada muunadda soo-saaraha oo u oggolow soo-saaraha inay soo sheegaan qiimaha dhabta ah. Haddii aadan haysan muunad jireed, waxaad sidoo kale siin kartaa sawir qaabeysan oo faahfaahsan shirkadda soo saaraha. Soo-saaraha ayaa sameyn kara loox sida ay tahay naqshadeyntaada. Ka dib markii muunada la dhammeeyo, qiimaha ayaa soo bixi doona.
Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa mid aad muhiim u ah inaad wax ka iibsatid, si aad fikrad xun uga hesho qiimaha boorsooyinka oo aad uga fogaato inay ku khiyaaneeyaan qaar ka mid ah soo saarayaasha aan caadiga ahayn oo si ula kac ah uga warbixinaya qiimaha sarreeya